November 2017 – CRM
The UK parliament has hadalengthy discussion on the Rohingya crisis which Minister for Asia and the Pacific Mark Field callsa‘global humanitarian catastrophe’ and not justaMuslim issue. British shadow Minister for International Development Roberta Blackman-Woods, who recently visited Bangladesh and Rohingya camps, moved the motion with Ian Paisley in the chair. […]
Posted on November 30, 2017 Author swelsone	Comment(0)
WASHINGTON (AP) — The United States declared the ongoing violence against Rohingya Muslims in Myanmar to be “ethnic cleansing” on Wednesday, threatening penalties for military officials engaged inabrutal crackdown that has sent more than 620,000 refugees flooding over the border to Bangladesh. Secretary of State Rex Tillerson blamed Myanmar’s security forces and “local […]
Posted on November 23, 2017 Author swelsone	Comment(0)
Rohingya crisis: US suspends offical travel to Burma as Rex Tillerson accuses regime of 'ethnic cleansing'
The United States has temporarily suspended travel for American officials to parts of Burma’s Rakhine state, the US embassy said on Thursday, citing concerns over potential protests after Secretary of State Rex Tillerson accused the country of carrying out the “ethnic cleansing” of Rohingya Muslims in the state. Tillerson threatened penalties for military officials engaged inabrutal crackdown that has sent more than 620,000 refugees […]
VATICAN CITY (Reuters) – Pope Francis will meet the head of Myanmar’s army and Rohingya refugees in Bangladesh, both late additions toatour of the two countries next week. Human rights monitors and U.N. officials have accused Myanmar’s military of atrocities, including mass rape, against the stateless Rohingya during operations that followed insurgent attacks […]
Posted on November 22, 2017 Author swelsone	Comment(0)
Posted on November 21, 2017 Author swelsone	Comment(0)
Posted on November 20, 2017 Author swelsone	Comment(0)
အမေရိကန် သံအမတ်နဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ANP ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel နဲ့ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ မောင်တောဒေသအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ စစ်တွေမြို့က ပါတီဌာနချုပ်မှာ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွေက မွတ်စလင်တွေဘက်က ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာတွေဟာ ပဋိပက္ခကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေတာကြောင့် မျှမျှတတပြောဆိုဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ကျော် ကပြောပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်မခံဘူး၊ အဲဒီလို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က မကြိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောဆိုဖိအားပေးခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးတော့ ပဋိပက္ခတွေကို ကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင် တယ်၊ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က စာနာထောက်ထားစွာနဲ့ မျှတစွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ ပြန်ပြီးတင်ပြတဲ့အခါ သူတို့က အဲဒါကိုလက်မခံဘူး” ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ […]
Aung San Suu Kyi Blames Illegal Immigration for the 'Spread of Terrorism'
(NAYPYITAW, Myanmar) — Myanmar leader Aung San Suu Kyi said the world is facing instability and conflict in part because illegal immigration spreads terrorism inaspeech Monday that comes as her country is accused of violently pushing out hundreds of thousands of unwanted Rohingya Muslims. Suu Kyi did not directly mention the refugee exodus […]
မြန်မာပြည်ကို ၂ရက်ကြာရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jeffrey Alan Merkley ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့က အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိ ကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့အနေနဲ့ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လွှို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ မီဒီယာတွေကရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားတာ ဖြစ် ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေမှန်ကို လေ့လာသွားတာမရှိဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြော ခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မမြင့်မြင့် ခိုင်က ပြောပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရမှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့အပါ အ ဝင် လူသားချင်း […]
Gregory Stanton The UN calls the Myanmar army’s aggression against the Rohingya “ethnic cleansing”. “Ethnic cleansing” isaterm invented by Slobodan Milosevic. It’saeuphemism for forced displacement and genocide. It’s an insidious term because there is no international treaty law against it, whereas there are international laws against forced displacement and genocide. “Ethnic […]
Posted on December 25, 2016 Author rightsforburma rightsforburma
OIC seeks UNSC intervention over Rohingya Muslims killings
Posted on November 6, 2017 Author swelsone